Fiantohana kalitao - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
RESOURCES / Antoka azo antoka
Miasa rafitra fitantanana kalitao ankatoavina izahay ary voamarina amin'ny fenitra ISO 9001: 2015. Hita taratra amin'izany ny fahavononantsika hanatsara hatrany ny kalitao sy hanome fahafaham-po ny mpanjifa. Ny fandaharanay momba ny kalitao dia mahatonga ny WayKen ho safidy azo antoka sy azo antoka indrindra amin'ny tetikasanao manaraka.
Ny tanjontsika kalitao ：
Ny tahan'ny fandalinana vokatra ≥ 95%
Taham-panaterana ara-potoana ≥ 95%
Fahafaham-po ny mpanjifa ≥ 90%
Ny CreateProto dia natokana hanatsara sy hanatsara hatrany ny fahaizan'ny rindranasan'ny orinasa mpamokatra entana rehetra manomboka amin'ny prototype ka hatramin'ny famokarana ary ny fizotran'ny kalitao, ao anatin'izany ny machining CNC, ny prototyping haingana ary ny fitaovana haingana.
Ny rafitry ny kalitao ao amin'ny CreateProto dia mifantoka amin'ny tombontsoan'ny mpanjifa sady mamolavola teknika vaovao sy mandroso hamokatra faritra amam-panao miaraka amin'ny famaritana anao mihoatra ny andrasana. CreateProto dia mifanaraka tsara amin'ny rafitra fanamarinana kalitao voamarina ISO 9001: 2015, mampiasa fitaovana fanandramana mandroso izahay handrefesana sy hijerena ireo akora rehetra, raha toa kosa ny ekipanay injeniera manana kalitao manana teknolojia matihanina hijerena sy hiantohana ireo tetikasanao hihaona amin'ny famaritana kalitao henjana, mba hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifanay amin'ny indostria.
Ny politikantsika momba ny kalitao
Mametraka foto-kevitra fitantanana manara-penitra sy siantifika; Mamolavola fomba miasa sy fehezan-dalàna miasa; Manofanà mpiasa mahay miaraka amina fahaizana voalohany; Hatsarao ny fahombiazan'ny famokarana.
Miorina amin'ny fanantenana sy soatoavina avy amin'ny mpanjifa, manohy manamafy ny lafiny maro amin'ny fiasa sy fitantanana toa ny fitantanana ny drafitra famokarana izahay, ny fanatsarana ny fizotran'ny famokarana, ny fanatsarana ny fandrindrana ny rojom-bary, ny fifehezana ny vidin'ny famokarana ary ny kalitaon'ny mpiasa. Fanatsarana hatrany, fikatsahana hatsaram-panahy ary fanatsarana hatrany ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Kalitao sy fahombiazany
Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny rafitra fitantanana kalitao ankapobeny, mandritra ny dingana tsirairay amin'ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny fanaraha-maso, ny fiantohana ny fanatsarana ny fizotran'ny orinasa, sy ny fifandraisana mahomby eo amin'ny samy mpanjifa sy ny departemanta, koa mampiofana ny fahatsiarovan-tena momba ny kalitaon'ny mpiasa, manery ny fanavaozana mampihatra teknolojia hatrany, ary manamboatra vokatra avo lenta.
Fanavaozana sy orinasa
Mametraha rafi-pandaminana fianarana, mampihatra fitantanana fahalalana, manangona ary mandamina ny fahalalana ho an'ny fepetra fanitsiana sy fisorohana, teknolojia famokarana avy amin'ny teknisiana na departemanta matihanina, angon-drakitra momba ny fandraharahana na traikefa amin'ny famokarana mba hamorona loharanon-karena sarobidy manan-danja amin'ny orinasa, manome fotoana fanofanana mitohy ho an'ny mpiasa, fintino traikefa, mandrisika fanavaozana ary manatsara ny firaisan-kinan'ny orinasa.
Ny fizotran'ny kalitaontsika dia mihazakazaka amin'ny alàlan'ny tetikasa manontolo manomboka amin'ny RFQ mankany amin'ny fandefasana entana. Ny famerenana tsy miankina roa amin'ny kaomandy fividianana dia manomboka ny QA anay, mamaritra fa tsy misy fanontaniana na fifandirana momba ny refy, ny fitaovana, ny habetsany na ny datin'ny fandefasana. Avy eo dia nodinihin'ireo mpiasa efa za-draharaha voarindra ao amin'ny fananganana ary ny tatitra momba ny famokarana sy ny isam-batan'olona dia natao isaky ny asa takiana mba hamokarana ilay ampahany. Ny filàna sy torolàlana momba ny kalitao manokana rehetra dia voarakitra an-tsoratra ary ny elanelam-potoana fanaraha-maso dia avy eo miankina amin'ny fandeferana, ny habetsany na ny fahasarotan'ilay ampahany. Mampihena ny risika isika amin'ny alàlan'ny fanarahana sy ny famakafakana ny dingana rehetra amin'ny dingam-pamokarana mba hampihena ny ampahan'ny fiovan'ny ampahany, ary hiantohana ny kalitao azo antoka sy azo antoka ho an'ny faritra tsirairay, isaky ny mandeha.
Fanaraha-maso kalitao mifanaraka amin'izany, isaky ny ampahany, vokatra mankany amin'ny tetik'asa, mijery tsara amin'ny antsipiriany izahay, famahana olana, fikarohana fitaovana sy fomba fiasa vaovao, fampiasam-bola amin'ny haitao, fananganana ary fanohanana ekipan'ny fanamboarana haingana matihanina.
Famerenana ny famolavolana for manufacturing (DFM) ho an'ny tetikasanao rehetra
Famerenana ny baiko fifanarahana sy ny mpividy
Fahaiza-manao sy famokarana drafitra famokarana (PMC)
Fanaraha-maso ny akora ho avy
Santionany sy fizahana eo an-toerana (IPQC)
Fanaraha-maso ny vokatra tsy mifanaraka ary ny fampiharana ny hetsika fanitsiana sy fisorohana
Tatitra sy fanamarinana farany ary fanamarinana araka ny takiana (OQC)
Fanadihadiana fahafaham-po ny mpanjifa indroa isan-taona, ary ezahina hihoatra ny andrasan'ny mpanjifa
SEREIN Croma 8126 mandrindra milina fandrefesana (CMM) 800 × 1200 × 600 (mm), MPE (lesoka azo avela faran'izay betsaka) 3.0μm
ScanTech PRINCE775 loharano Laser Scanner 3D tànana: 7 + 1 hazo fijaliana laser mena / 5 tsipika laser mifanila amin'ny manga 200mm ~ 450mm / 100mm ~ 200mm, Fahamarinana hatramin'ny 0.03mm
Tabilao fizahana Granite, 1200 × 1000 (mm) / 1000 × 750 (mm)
Faritra feno Vernier Caliper, 0-100-150-200-300-600-1000 (mm)
Micrometers ivelany / Digimatic Holtest, 0-25-75-100-125-150 (mm) / 12-20-50-100 (mm)
Feno Pin Gage / Gage Block feno, 0,5-12 (mm) / 1.0-100 (mm), dingana 0.01mm
Fitsapana ny tsy fahalavorariana ambonin'ilay tany, Testeran'ny hamafin, sns.
Prototyping haingana sy famokarana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana,